Maizin' Andro • rapgasy.mg
Nifandona tamin’ireo mpikambana ao amin’ny Groupe Maizin’Andro. Ka nakana feo i Ramijah sy i Rassy
Ramijah Rakoto (Profil Facebook)
Ramijah Rakoto, ao anatin’ny Groupe Maizin’Andro, miangaly ny RAP. Rap amin’ny endrin’ny fijerinay azy fa tsy amn’ny fijerin’ny sasany azy
Rassy (Profil Facebook)
Rassy, ao anatin’ny Groupe Maizin’Andro. Manao ao anatin’ny tontolon’ny mozika RAP. Rap malagasy mo io mazava hoa azy satria ny tena dia Malagasy ary amin’ny foto-pisainana sy fijery izay mifanandrify ny firehi-kevitray fa tsy ohatran’ny hoe ny anao fa rehefa anay izy dia anay
Inona moa ny hevitry ilay anarana hoe : Maizin’Andro?
Ramijah : Ny tena hevitry ilay hoe Maizin’Andro izany dia ohatran’ny hoe : Maizina, alina (nuit) dia Andro : atoandro (jour) ka azo atambatra amin’ny teny hoe le jour et la nuit ary afaka hiasana daholo ao anatin’ireo fotoana ireo satria misy ny miheritreritra hoe ny alina dia fambara hoe aizina dia misy ny miteny azy hoe zavatra fambara ratsy na zavatry ny satana nefa Andriamanitra dia tsy afaka namorona ny mazava raha tsy tao anatin’ny maizina.
Noho izany ilaina ny maizina. Ary ianareo tsy afaka ny hiala-sasatra hitovy amin’ny mpanan-karena koa raha tsy tao anatin’ny maizina, amin’ilay resaka torimaso no tiako ahatongavana amin’io.
Dia izay no mahatonga an’ilay hoe Maizin’Andro, azo resahana daholo na andro na alina izany fa miankina amin’ny fomba fijerin’ny tsirairay io.
Tsy hoe rehefa maizina na loko marevaka dia ratsy na kao hoe loko satanika na koa hoe rehefa mazava dia loko tsara na hoe lokon’ny anjely fa io afaka tafin’ny anjely daholo na akanjo fisaonana aza.
Ny fotoana niandohana?
Nanomboka tany amin’ny taona 2010 tany ny fanombohan’ny ketrika. Izany hoe mbola vao aingana ihany fa aza ny vanim-potoana no jerena fa ny zava-bita. Dia manantena zavatra goavana eo amin’ny Rap, tsy manantena hoe halaza na voninahitra na inona fa manantena fotsiny hoe anova olona iray ny sangan’asa hoentinay. Anoa azy amin’ny tsara kokoa fa tsy hoe hitondra azy hivoana ho any amin’ny ratsy.
Iza avy ny mandrafitra an’ilay groupe?
Ny ao anatin’ilay groupe hoe Maizin’Andro dia misy groupe 7 : vehivavy roa ary lehilahy dimy.
Ireo vehivavy reo ireo, ny iray amin’ireo manao Rap ary ny iray mihira (na swing), manaingo ny hira.
Itafikarivo (Sakina Fray) feat Mainty – Takodah
Very Anaty Lalina
Buddha El Taga feat Kaizer
Takodah & Ngah-B feat KARNAZ
Affichage du Contenu en 1,539,881,637.734 seconde(s) avec 90 requêtes SQL